M/weynaha Hirshabeelle oo sheegay in aan sharci aheyn shir maamulkiisa ka maqan yahay… – Hagaag.com
M/weynaha Hirshabeelle oo sheegay in aan sharci aheyn shir maamulkiisa ka maqan yahay…
Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa sheegay in aanu sharci aheyn shir maamulkiisa ka maqan yahay inay isugu yimaadaan Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada oo lagu wado inuu ka dhaco magaalada Garowe.
Isagoo Wariyeyaasha kula hadlayay magaalada Jowhar ayuu Madaxweyne Waare sheegay in Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada uu ka kooban yahay shan maamul, isagoo xusay in aanu sharci aheyn go’aan ama talo ay gaar u gaaraan afar maamul.
Madaxweyne Waare ayaa sheegay in nasiib darro ay mowqifkooda ka gedi waayeen Golaha Iskaashiga, isla markaana ay xaq u leeyihiin inay ku raaci waayaan, balse aanay xaq u laheyn inay go’aan ay ka maqan tahay Hirshabeelle.
“Xaq ayaad u leedihiin in maamuladiina aad go’aan u gaartiin, laakiin talo kuma biirin kartaan anagoo ka maqan Hirshabeelle wax danaheeda ah, wixii wanaag ee la rabo waa soo bixi doonaan, shirka Nairobi wax matalaad kuma lihin, mana ka warqabin”ayuu yiri Madaxweynaha Hirshabeelle.
Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa bishii horay ka baxay go’aankii maamul goboleedyada ka soo saareen Shirka Kismaayo, kaasoo ay xiriirka ugu jareen dowladda Federaalka, waxaana uu dhankiisa heshiis la gaaray dowladda Federaalka, hase ahaatee Golaha Iskaashiga maamul goboleedyada ayaa sheegay in aanay quseyn heshiiskaas.
Si kastaba ha ahaatee Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada oo la aas aasay sanadkii hore ayaa markii u horeysay soo kala dhex galay inay kala mowqif noqdaan shantii maamul ee ku mideysnaa, kaddib markii Hirshabeelle ay gooni iska taagtay.